कोरोना दिउँसो मात्र सर्छ , बिहान र बेलुका सर्दैन ? - News Bihani
कोरोना दिउँसो मात्र सर्छ , बिहान र बेलुका सर्दैन ?
अहिले बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण विश्वका कतिपय देशमा लकडाउन छ भने कतिपय देशमा दैनिकी सामान्य अबस्थामा फर्कने प्रयासमा प्रयत्नरत छ। सन् २००३ मा सार्स भाइरसको रुपमा जन्मिएको यो चीनबाट सुरु भई संसारका २६ देशमा फैलिएको पाइन्छ। फेरी यो मर्सको नाममा सन् २०१२ मा साउदी अरेबियामा देखा परेको थियो । पछि फेरी सन् २०१९ मा यो महामारी चीनबाट कोरोना भाइरस कोभिड-१९ नामबाट संसारभर फैलिएको छ। अमेरिका , भारत,इटाली, स्पेन,ब्राजिल, जर्मनी ,बेलायत , फ्रान्सलगायत कयौं देशले नराम्रो प्रभाव ब्यहोरेका छन।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि प्रवाभ बढ्दो छ । नेपालमा १२० दिनको त्यो कहालीलाग्दो लकडाउन अन्त्य भएको एक महिना बित्न नपाउंदै फेरी निषेधाज्ञा जारी छ । लामो समय बन्द हुँदा डामाडोल बनेको देश पुरानै लयमा कहिले फर्किन्छ यसको जवाफ कसैसंग छैन । यता आफ्नो घर व्यवहार चलाउन नसक्ने अबस्थामा आम नागरिक पुगेका छन् भने सरकार लकडाउन गर्ने बाहेक अरु कुनै बिकल्प अपनाउन चाहंदैन । सर्वसाधारण,ब्यापारी र प्रहरीबीच अहिले दिनहुँ लुकामारी हुने गरेको छ । यो अवस्था सरकारको रबैयाका कारण उत्पन भएको हो ।
एकातिर प्रहरीमा संक्रमण बढ्दो छ भने समुदायस्तरमा कोरोना फैलँदोदर बढ्दो छ । प्रहरीले बिशेष गरि ग्रामिण शहरी क्षेत्रमा संचालित ब्यापार व्यवसाय निश्चित समय सिमाभित्र खोल्न र बाँकी समय बन्द गराउने गर्दछ भने व्यवसायी पनि प्रहरी देखेमा वा आएमा शटर बन्द गर्ने गर्दछन भने प्रहरी नहुँदा फेरी खोल्ने गर्दछन । बिहान बेलुका मानिसहरु प्रहरी नहुँदा उतिकै भीडभाडसाथ बिना मास्क हिंडडुल गर्ने गर्दछन । आम नागरिक पनि केवल प्रहरीको आँखा छल्ने काम मात्र गर्दछन । बिहान बेलुका बजारमा भिड लाग्ने गर्दछ भने सुरक्षा सामग्री देखाउनको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ ।
दिउँसो बजार बन्द गर्दैमा कोरोना रोकिने भन्ने होइन र यो हिउँद र बर्खा जस्तो सिजन पनि होइन कि एक सिजन अन्त्य भयो कि अर्को सिजन सुरु हुने । बिश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना तद्काल अन्त्य नहुने बारम्बार बताईरहेको अबस्थामा पनि सरकार लकडाउनको अरु कुनै बिकल्प देख्दैन भने ऊ सँग कुनै योजना र भिजन नै देखिदैन । अब प्रश्न उठ्छ के कोरोना दिउँसो मात्र सर्छ ? बिहान र बेलुका सर्दैन ? यदि सर्छ भने दिउसो मात्र बन्द किन ? बिहान बेलुका खुलेआम यात्रा हुने गर्दछ । कामाउधन्दा बाहेक लामो समय लकडाउन गरेर माखो मार्न नसकेको सरकार जसरी पनि सर्वसाधारणलाई दुख दिने बाहेक अरु बिकल्प देख्दैन र बिकल्प खोज्न पनि चाहंदैन ।
अहिले पनि बिहान बेलुका बजारमा ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सायद असम्भव जस्तै छ । सरकारसंग कोरोना नियन्त्रण गर्ने बिभिन्न बाटोहरु सुरुमा प्रसस्त थियो तर उसैले सबै बाटो बन्द गरि लकडाउनको बाटो रोज्यो । अब सोचौ कोरोना बिश्व स्वास्थ्य संगठनले भने झैँ कहिले अन्त्य नभए के सधै बजार बन्द गर्ने ? भ्याक्सिन अन्य देशमा आएपनि नेपालमा आउन समय लाग्न सक्छ । तर के भ्याक्सिन नआएसम्म बजार बन्द गर्ने ? भनिन्छ जनउत्तरदायी सरकार नभए जनताले दुख र पिडाबाहेक अरु केहि पनि पाउंदैन ? हो यो नियति नेपाली जनताले कहिलेसम्म भोग्नेछन् त्यो भने समयले नै बताउनेछ ।
शुक्रवार, भाद्र १२ २०७७१२:५३:११
# corona update # corona vaccine
त्रिवि अन्तर्गतका सबै क्याम्पस, विभाग र स्कुलहरूमा नियमित पठनपाठन हुने
दुई समूहबीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु, १२ जना घाइते
सामाजिक सञ्जालमा प्रम ओलीको भन्दै फैलिएको यो फोटो कसको हो ? यी हुन् ति व्यक्ति !